I-Android Oreo: igama layo liqinisekisiwe kwaye ezi zezona ndaba ziphambili | Iindaba zeGajethi
URuben inyongo | | Android, software
Sele sikuxelele kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo: kunye nokusitheka kwelanga izolo, UGoogle uthathe isigqibo sokuveza inguqulelo yakhe yamva nje ye-Android. Ihlala iqinisekisiwe ukuba iza kuba yintoni igama elikhethiweyo kwi-Android 8.0. Kwaye nangona yayiyimfihlo inamazwi, sinokuqinisekisa ukuba igama elifumana uguqulelo lwangoku ngu Android Oreo.
Ngoku, yayingekuphela kokuchazwa kwenguqulelo yayiliqhinga, kodwa yeyiphi iqonga le-Android eliza kusinika kwakhona kwaye zeziphi iindaba ezaziza kufunyanwa ziisiphelo sendlela yokusebenza kaGoogle. Ukongeza, Oku kuya kusinika umbono wokuba amaqela alandelayo aza kusinika ntoni -kakhulu smartphones njengaye amacwecwe-ukuqaliswa kwintengiso. Ke, makhe siqwalasele iindaba eziphambili onokuzifumana kwi-Android Oreo.
1 I-Android Oreo iya kuphinda kabini ngokukhawuleza njenge-Android Nougat
2 Umfanekiso-mfanekiso, 'iiapps' ezimbini kwiscreen ngaxeshanye
3 Ukugqitywa ngokuzenzekelayo kuza kwi-Android Oreo
4 Iindawo zokwazisa kwizicelo
5 IiNkqubo ezikhawulezileyo ze-Android-Tsibela ufakelo
6 I-emojis entsha (60 ukuba ichane)
7 Iibhetri ezingakumbi kunye nokhuseleko ngakumbi kwi-Android Oreo
8 Ukuhlaziywa okukhawulezayo kule nguqulo
I-Android Oreo iya kuphinda kabini ngokukhawuleza njenge-Android Nougat
Amava omsebenzisi abaluleke kakhulu kumsebenzisi: ukuba ayilunganga, ngokuqinisekileyo kwixa elizayo ayizukuphinda iqonga. Ngokwiphepha lokwazisa lwenguqulo elandelayo, i-Android 8.0-aka I-Android Oreo— Iya kunyuka iphindwe kabini kunayo i-Android Nougat yangoku.
Ngokwenkampani, wonke umntu uya kuba lulwelo ngakumbi kwaye iya kubulala iinkqubo zangasemva. Ngale ndlela baya kukhulula iprosesa kwaye bajonge kulo msebenzi ungaphambili. Siza kubona ukuba iziphatha njani kwi-mobiles zangoku.
Umfanekiso-mfanekiso, 'iiapps' ezimbini kwiscreen ngaxeshanye
Es omnye wemisebenzi eceliwe kakhulu eluntwini. Ukongeza, le nto intsha enikezelwa kwi-Android Oreo yinto esele yenziwe kwezinye iinkqubo zokusebenza ixesha elithile. Ngaphezu koko, sinokukuxelela ukuba i-Samsung sele iyenzile le nto kwiimodeli zayo kangangexesha elithile, ngakumbi kuluhlu lwayo lweNqaku.
Ngoku uya kuba nethuba lokwenza njalo sebenza ngezicelo ezimbini kwiscreen ngaxeshanye. Oku kuya kuba luncedo kakhulu xa kushenxiswa kwifomathi yethebhulethi, apho umsebenzisi anokubukela ividiyo ye-YouTube ngelixa besenza idinga kwikhalenda. Kananjalo kuya kuhlala kubonakala ukuba zonke izicelo ziya kuhambelana nale nto intsha.
Ukugqitywa ngokuzenzekelayo kuza kwi-Android Oreo
Inyaniso kukuba ngenani lezicelo esizisebenzisayo kunye nenani lamagama abasebenzisi kunye neephasiwedi eziyimfuneko ukuyisebenzisa, ixesha elithathayo ukuzalisa zonke iibhokisi zencoko yababini liphezulu kakhulu. Ngoku ukuba eli nyathelo lisusiwe, siyakwazi ukuhamba ngokukhawuleza kwiinzame zethu.
Ngenxa yoko, uGoogle uye wacinga ngale nto kwaye wazisa abadumileyo-nababhengeziweyo-abagqityiweyo kwinkqubo yayo yokusebenza yeselfowuni ukuze ikhumbule 'ukungena kwethu' kwangoko kwaye isivumele ukuba sihambe ngokukhawuleza kwimisebenzi yethu yemihla ngemihla.
Iindawo zokwazisa kwizicelo
Njengakwimeko yokusetyenziswa kwemiyalezo kwangoko esibonisa ukuba zingaphi izaziso ezisilindeleyo xa sivula usetyenziso, yile nto isilindeleyo ukusukela ngoku kwi-Android Oreo kuninzi lweenkqubo esizifakileyo kwiiterminal zethu.
Ngale ndlela, ukuphathwa kwezaziso ezisifumanayo kuye kulungelelaniswe kwaye siya kwazi ngamaxesha onke ukuba silindelwe ntoni malunga noku. Ngaphezulu, Ukuba sicinezela ixesha elide kwi-icon yeapp, ibhokisi yencoko yababini iya kuvela kwaye sinokunxibelelana ngqo nezaziso ezingenayo. Ngamafutshane: kwakhona sibhekisa kulawulo lwexesha lethu.
IiNkqubo ezikhawulezileyo ze-Android-Tsibela ufakelo
Ukusetyenziswa kwezicelo-kwaye ngakumbi izibonelelo- kulungelelaniswe ngokubonakalayo nomsebenzi omtsha 'weeNkqubo ezikhawulezileyo'. Kwaye yile ndlela, fumanisa usetyenziso olutsha ngesikhangeli, uthungelwano lwasentlalweni okanye usetyenziso lomyalezo okhawulezileyo kuya kuba lula kakhulu.
Lo msebenzi usivumela ukuba ube tsiba ufakelo oludinisayo kwaye uvavanye ngokuthe ngqo izicelo ngokutyibilikayo. Oko kukuthi, uya kufumana-okanye ufumane-amakhonkco kwizicelo, kwaye nje ukuba uzicofe, uya kuba nakho ukuziqhuba.
I-emojis entsha (60 ukuba ichane)
Sisebenzisa ii-emojis ezingakumbi nangakumbi kwiincoko zethu ezibonakalayo. Kungenxa yoko le nto sinayo kwi-repertoire yethu, ngcono. Ke, uGoogle uye wehla waya kwishishini kwaye iphinde yahlengahlengisa uluhlu lwayo lwee-emojis ezikhoyo. Ukongeza, ibandakanye ukuya kuthi ga kuma-60 amatsha ongakhange uwabone ukuza kuthi ga ngoku. Ngaba awunomdla wokwazi ukuba ziyintoni? Sele siphose iinzipho.
Iibhetri ezingakumbi kunye nokhuseleko ngakumbi kwi-Android Oreo
Okokugqibela, uGoogle akalibali ukhuseleko kunye nokuzimela kweetheminali. Ke ubeke inkqubo entsha yokukhusela idatha ngeGoogle Protect. Oku Ayizukukhathalela kuphela ukugcina ulwazi lomsebenzisi lukhuselekile. Iya kuba noxanduva lokujonga zonke izicelo esizifakayo kwiitheminali zethu.
Okwangoku, ngenguqulelo nganye entsha yenkqubo yokusebenza, UGoogle uzame ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla. Kwaye i-Android 8.0 yayingazukuncipha. Ke, kuphela 'ngokubulala' izicelo ezingasemva ziya kufumana ukuzimela.
Ukuhlaziywa okukhawulezayo kule nguqulo
Njengokuba kuhlala kusenzeka, iikhompyuter zokuqala ezilindelweyo ukufumana olu hlobo lutsha ziiselfowuni ezithengiswe nguGoogle kwivenkile yazo. Nangona kunjalo, ngokuphela konyaka ezinye iinkampani kulindeleke ukuba zijoyine. Sithetha ngayo Isamsung, iHuawei, LG okanye iNokia entsha. Kwaye inkampani sele ikhuphe ikhowudi yemvelaphi ukukhawulezisa uhlaziyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » I-Android Oreo: igama layo liqinisekisiwe kwaye zezi ziindaba eziphambili
I-HTC yehlisa ixabiso leiglasi zayo zokwenyani zeHTC Vive